This Sept. 29, 2013 file photo shows rotting elephant carcasses in Hwange National Park, Zimbabwe, wildlife officials said animals were poisoned with cyanide by poachers who hack off the tusks for the lucrative illegal ivory market. Political and military elites are seizing protected areas in one of Africas last bastions for elephants, putting broad swaths of Zimbabwe at risk of becoming fronts for ivory poaching, according to a nonprofit research groups report that examines government collusion in wildlife trafficking.
This June 21, 2103 file photo shows a steamroller and a backhoe used to crush seized elephant tusks during a destruction ceremony at the Protected Areas and Wildlife Bureau of the Department of Environment and Natural Resources in Quezon city, northeast of Manila, Philippines. Political and military elites are seizing protected areas in one of Africas last bastions for elephants, putting broad swaths of Zimbabwe at risk of becoming fronts for ivory poaching, according to a nonprofit research groups report that examines government collusion in wildlife trafficking.
Bullit Marquez / AP file photo
This Jan. 21, 2014 file photo shows Zimbabwean President Robert Mugabe in Zvimba, Zimbabwe. Political and military elites are seizing protected areas in one of Africas last bastions for elephants, putting broad swaths of Zimbabwe at risk of becoming fronts for ivory poaching, according to a nonprofit research groups report that examines government collusion in wildlife trafficking.
Tsvangirayi Mukwazhi / AP file photo
Africa land grabs endanger elephants : 1 / 3